विश्वका धनी बिल गेट्स र श्रीमती मेलिन्डाले सम्बन्ध विच्छेदमा दिएको संयुक्त वक्तव्यमा के छ ? | Rato Kalam
विश्वका धनी बिल गेट्स र श्रीमती मेलिन्डाले सम्बन्ध विच्छेदमा दिएको संयुक्त वक्तव्यमा के छ ?
काठमाडौ । विश्वका धनी माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिन्डा गेट्स २७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । आज उनीहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनीहरु दुबैले संयुक्त रुपमा एक वक्तव्य जारी गर्दै सम्बन्ध विच्छेदको सन्देश दिएका हुन् । यति चर्चित जोडीको उक्त वक्तव्यमा के छ सबैको चासोको विषय हो । यसैले हामी उक्त वक्तव्यलाई यहाँ जस्ताको तस्तै राख्दैछौ ।
हाम्रो सम्बन्धमा ठूलो सोच विचार गरेर धेरै पछि हामीले आफ्नो विवाह समाप्त गर्ने निर्णय गरेका छौं । पछिल्ला २७ बर्षमा हामीले तीन अविश्वसनीय बच्चाहरूलाई हुर्काएका छौँ । यो जगमा सबैले काम गर्ने आधार निर्माण गरेका छन् ।
जसले सबै मानिसहरूलाई स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीउन सहयोग गर्ने भइसकेका छन् । हामी त्यो लक्ष्यमा विश्वास बाँड्न एकसाथ अघि बढ्छौ र फाउण्डेशनमा सँगै काम जारी राख्छौ । तर हामी अब विश्वास गर्दैनौं कि हामी आफ्नो जीवनको यस अर्को चरणमा एक जोडीको रूपमासँगै बढ्न सक्दछौ । हामी आफ्नो परिवारको लागि स्थान र गोपनीयता सँधै कायम राख्छौ। अब हामी नयाँ जीवन सुरुवात गर्दैछौ ।
मेलिन्डा गेट्स र बिल गेट्स
Afteragreat deal of thought andalot of work on our relationship we have made the decision to end our marriage. over the last 27 years, we have raised three incredible children and builtafoundation that works all over the world to enable all people to lead healthy, productive lives.
we continue to shareabelief in that mission and will continue our work together at the foundation, but we no longer believe we can grow together asacouple in this next phase of our lives, we ask for space and privacy for our family as we begin to navigate new life .
झापामा गस्तीमा रहेका प्रहरीको चट्याङ लागेर मृत्यु